IHarms ekwi-Intanethi iPhepha eliMhlophe-Isiseko soMvuzo
UMary Sharpe, uSihlalo
Iifografi kunye neengxaki zobundlobongela
I-RCGP Workshop eVunyelweyo
Ifilosofi yethu kwizeMpilo zoSondo
Iibhlog ezivela kwi-Reward Foundation
Uqeqesho loKhuseleko loBucala
Izicwangciso zesifundo sasimahla
Izicwangciso zezifundo: Iinyanda
Izicwangciso zezifundo: Iphonografi ye-Intanethi
IziCwangciso zeSifundo: Ukuthumela imiyalezo ngeSelf
Imigaqo kunye neMeko yevenkile
I12 Winter 2021
I-11 Autumn 2020
Inombolo ye-10 ye-AV kunye neNgqungquthela yeHlabathi
I-9 Spring 2020
I-8 Autumn 2019
I-7 I-Festive Edition 2018
I-6 Spring 2018
I5 Winter 2018
I-4 Autumn 2017
I-3 Special Edition
I2 Summer 2017
I-1 News Rewarding
I-TRF kwi-Press 2020
I-TRF kwi-Press 2019
I-TRF kwi-Press 2018
I-TRF kwi-Press 2017
I-TRF kwi-Press 2016
UMary Sharpe kwi-Press Pre-TRF
I-Porn Porn iyathinta ubuchopho
Ukuphuhliswa kwengqondo kwintliziyo
Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Uthando nje ngoBonding
Ababini Bonding Bonding
Uthando njengesifiso soSondo
Ukunciphisa isifiso socansi
Isini kunye ne-Porn
Iphonografi ithinta impilo
Ibhalansi kunye nokungalingani
Iimpawu Zengqondo Zobunono
Iziphumo zomzimba zoTyhutho
Ukunyamezela kwengqondo Ukunciphisa
Izilwanyana kunye nezifo ezithathelwana ngesondo
Imemori kunye nokuFunda
Imifanekiso engamanyala kunye neTyala leSondo kwangoko
Uthando, ubulili, intanethi kunye noMthetho
Yintoni imvume kwimithetho?
Imvume kunye nentsha
Iyintoni imvume kwimisebenzi?
I-Sexting phantsi komthetho waseSkotland
Ukuthumelelana iifoto phantsi komThetho waseNgilani, Wales kunye noMantla eIreland
Ngubani othumela i-sexting?
Ukunyuka kolwaphulo-mthetho ngokwesondo
Imifanekiso engamanyala iyonakalisa indalo
Indlela yokujonga ingxaki yezononophelo
Indlela yokuyeka uonobumba?
Uvavanyo lweZenzo zoSondo ngoBantu
Umlutha woononophala uqala nini?
Uncedo kwi-intanethi yezilwanyana
Ukuhamba Namaxholongwane Okuninzi
I-TRF 3-imodeli yokubuyisela isinyathelo
Inkqubo yokukhusela i-TRF 3
Ingxelo yengqungquthela yobudala
Indlela Yokufikelela Uphando
I-TRF ikhuthaza izibonelelo
Iintlanganiso kunye neZenzo
Izibonelelo zeRCGP Workshop eVunyelweyo
Izixhobo zabantu abadala
Izixhobo zokusebenza ezingaphantsi kwe-12s
IziCwangciso zeziFundo zeSikolo
Umyalelo Wokugweba Umthetho
Ikhaya Iibhulogi zeendaba I-Harm Online i-White Paper
I-Harm Online i-White Paper
lawula888 15I Epreli 2019 Iindaba zamva
Akukho mmangaliso kodwa isenamandla !! Umjikelo omkhulu wehlombe
Urhulumente wase-UK ulindelwe kudala IPhepha leNgcacisonkqubo kwiiHarms ezikwi-Intanethi Ekugqibeleni yavela nge-8 ka-Epreli 2019. Ukuba ufuna isishwankathelo esikhawulezayo (ish), umpapasho weendaba wakhupha iOfisi yaseKhaya Apha.
Ukuba ungathanda impendulo evela kumntu oyiqonda kakuhle le ntsimi, nantsi iposti yebhlog yeendwendwe. UJohn Carr, ingcali ekhokelayo, ubhala…
Samkelwe ngezandla ezishushu ngabantwana, ngabazali kunye neminye imibutho yoluntu. Kungenxa yokuba luxwebhu lwenqanaba lokuqala, olubonisa ukuqala kwendlela entsha kulawulo lwe-Intanethi e-UK. Nangona kunjalo, wonke umntu uyazi ukuba kwenzeka ntoni apha kunesimo sangoku phantse kuyo yonke inkululeko yenkululeko emhlabeni. Kukho isizathu soko.
Nazi iintloko zam:
Ngubani okule ndawo?
Iinkampani ezi "Kububanzi" zezi zezi "Vumela abasebenzisi ukuba babelane okanye bafumane umxholo owenziwe ngumsebenzisi okanye banxibelelane nabanye kwi-intanethi." Ndicinga ukuba yenye indlela yokuthetha "Imidiya yokuncokola". Kodwa ngokunokwenzeka inokuhamba ibanzi kuneenkampani ebecinga ukuba ziindawo zosasazo zasekuhlaleni kunye neenkonzo.
Umsebenzi osemthethweni wokukhathalela
Isiseko sePhepha leNgcacisonkqubo yinjongo ebhengeziweyo yokuseka uxanduva olutsha olusemthethweni lokhathalelo ukwenza ukuba iinkampani zithathe uxanduva ngakumbi ngokhuseleko lwabasebenzisi bazo kunye nokuqubisana neengozi ezibangelwa ngumxholo okanye umsebenzi kwiinkonzo zabo.
Ukuthobela kuya kunyanzeliswa ngumlawuli ozimeleyo
Umlawuli omtsha, osemthethweni uya kusekwa. Kwiikhowudi zokuziqhelanisa iya kubeka oko kulindeleke kwiinkampani ezifanelekileyo. Ukuba iinkampani zifuna ukufezekisa uxanduva oluchaziweyo ngendlela engachazwanga kwikhowudi, kuya kufuneka bachaze kwaye baxhase kumlawuli ngendlela enye indlela abanokuyihambisa ngayo inqanaba elifanayo okanye elikhulu lempembelelo.
Imigaqo kunye neemeko zenkampani zifumana ukubaluleka okutsha
Imigaqo kunye neemeko zenkonzo ziya kufuneka zicace kwaye zifikeleleke, kubandakanya abantwana kunye nabanye abasebenzisi abasesichengeni. Le sele iyimfuneko ye-GDPR enokuthi ichazwe ngokupheleleyo kwikhowudi yokusebenza kuyilo olufanelekileyo lobudala eliza kupapashwa ngumzimba wabucala wase-UK (i-ICO) kungekudala (?).
Ngokubanzi, umlawuli omtsha uza kuvavanya ukuba inyanzeliswa kangakanani imigaqo kunye neemeko zenkampani. Ukwazisa iingxelo zayo kunye nokukhokela isenzo sayo, umlawuli uya kuba negunya lokufuna iingxelo zonyaka kwiinkampani.
Iyaqiqa kwaye iyalingana
Umlawuli uya kuthathela ingqalelo amandla eenkampani ukuhlangabezana neemfuno zolawulo, kubandakanya ukufikelela kumaqonga abo ngokubhekisele kubasebenzisi kunye nobukrakra bezinto ezimbi.
Le ndlela yokulinganisa iya kubekwa kumthetho oya kwenza kucace ukuba iinkampani Bayacelwa ukuba bathathe amanyathelo afanelekileyo nolinganayo ukujongana nokwenzakaliswa kweenkonzo zabo (ugxininiso lwam).
Umlawuli uya kubeka ulindelo olucacileyo lwezinto ekufuneka zenziwe ziinkampani ukujongana nemisebenzi engekho mthethweni kunye nokugcina abantwana bekhuselekile kwi-Intanethi.
Akukho njongo yokulahla umgaqo wokuzikhusela kwiqonga kodwa
"Isakhelo esitsha solawulo (siya kuthatha) indlela ecokisekileyo (ngokwandisa) uxanduva iinkonzo ezinalo malunga nokwenzakaliswa kwi-Intanethi"
Ndiyathemba ukuba oku kuya kukhokelela kwinqanaba eliphezulu lokuthunyelwa kwe-PhotoDNA kunye ne-algorithms ezinokuthi zibone i-paedophilic kunye nezinye iindlela zokuziphatha eziyingozi njengokuxhaphaza.
Hayi ngaphambi kwexesha.
Ukuthiya igama, ukuhlazisa nokwenza izinto elubala
Umlawuli uya kuba namandla amakhulu okufuna iinkampani ukuba zinike ngolwazi. Ukungabonakali kuya kuba yinxalenye ebalulekileyo yolawulo olutsha. Iinkampani ezingekhoyo kwisnuff ziya kuchongwa esidlangalaleni.
Iifayini, ukuvimba kunye noxanduva lolwaphulo-mthetho
Umlawuli uya kuba noluhlu lwezixhobo zokuxhasa kunye nokuxhasa umgaqo-nkqubo kubandakanya amandla okuhlawulisa isohlwayo esikhulu, ngokunokwenzeka nokuba afune iisayithi okanye iinkonzo ukuba zivaliwe. Ukwenza abaphathi abaphezulu ukuba babe noxanduva lolwaphulo-mthetho kukusilela nako kumakhadi.
Umhlophe ufakwe eluhlaza
Kuyatshiwo ukuba iPhepha leNgcacisonkxu linxitywe kakhulu luhlaza. Oku kuthetha ukuba zininzi iinkcukacha ezibaluleke kakhulu ekufuneka zenziwe. Ezimbini ezibaluleke kakhulu kukuchongwa kunye namagunya omlawuli kunye nendlela eza kuxhaswa ngayo.
Kukho ixesha lokubonisana ngokusesikweni leenyanga ezintathu kodwa akukho mathandabuzo okuba le micimbi iya kusixhalabisa ngaphaya koko. Kuya kufuneka umthetho. Ukuqhekeka kweBrexit, ayifane ibe yinto enokukhawuleziswa.
Olunye uvavanyo olunesibindi kodwa inenkxaso ebanzi
Ewe kuyakubakho iimpikiswano malunga neenkcukacha ezibalulekileyo. Nangona kunjalo, onke amaqela ezopolitiko aphambili alungelelaniswe ngokubanzi ngokunxulumene namanqaku aphambili kwiPhepha leNgcacisonkqubo. Kungenxa yokuba uluvo loluntu luzinzile emva kwezi ntlobo zemilinganiselo. Kuza kubakho iingcinga ezisacinga ukuba oorhulumente kunye nePalamente mabahlale kude nemicimbi enje. Kodwa xa uMark Zuckerberg efuna umgaqo osemthethweni ndiyathandabuza ukuba abo baneembambano baya kufumana nantoni na.
Iingcango zeThuba lokugqibela uSaloon zibethelelwe zatywinwa.
Le bhlog yathunyelwa kuqala Aprili 8, 2019 by John Carr. Ukuba ungathanda ukubona ezinye iiblogi esizibambe ukusuka kuJohn, nazi ke.
UMthetho woBugcisa base-UK
Abantu abadala kuphela: imfazwe yokugcina imifanekiso engamanyala e-intanethi evela kubantwana baseBrithani
Yabelana ngale nqaku
Incwadi yeaudiyo- yifumane SIMAHLA ekuviweni
Incwadana yethu Iindaba Ezixhamlayo ngumthombo wokuphefumlelwa okukulethwa kutshanje ekuqondeni kwethu indlela uthando, isondo kunye nobuchopho bethu bebenxibelelana. Asiyi kukuhlambalaza kwaye awukwazi ukuzibhalisa nayiphi na ixesha.
Ukuba unemibuzo malunga nomsebenzi esiwenzayo, nceda ungene apha apha.
Ungasilandela nathi kwi-Twitter
Ifowuni +44 (0) 7506 475 204
UMGAQOQO WENKCUKACHA | UMTHETHO WABUCALA | Mayelana | UKUGCINISWA KWEZEMPILO
© 2020 ISICWANGCISO SOKWENZA IMALI: ZONKE AMALUNGELO OKHUSELEKILEYO
I-Foundation Foundation, i-5 Rose Street, i-Edinburgh, i-EH2 2PR: I-Scottish Charitable Incorporated Organisation SC044948
Chwetheza kwaye Cinezela "ngenisa" ukuKhangela